JMJ Mahajanga : Miantso fahamailoana ny minisiteran’ny Fahasalamana -
AccueilSongandinaJMJ Mahajanga : Miantso fahamailoana ny minisiteran’ny Fahasalamana
JMJ Mahajanga : Miantso fahamailoana ny minisiteran’ny Fahasalamana
Atao ny 8 hatramin’ny 14 oktobra izao, any Mahajanga ny fivoriana tanora kristianina na JMJ. Ao anatin’ny fotoanan’ny fivorian’ny olona maro avy amin’ny faritra samihafa toa izao, dia mety hisy trangana voina na aretina miseho. Anisan’izany ohatra ny lozam-pifamoivoizana, ny dobo an-drano, ny aretina samihafa, ny doro tanety, ny hain-trano sns…
Azo atao tsara anefa ny misoroka sy mitandro ny fahasalamam-bahoaka manoloana azy ireny.
Isan’izany ny fanaraha-maso ny fitaovam-pifamoivoizana mialohan’ ny fiaingana, mba ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana, eo koa ny fanaraha-maso ny fahasalaman’ny mpizaika rehetra mialohan’ny fiaingana mankany Mahajanga, mba ho fisorohana ny fihanaka ny valanaretina samihafa. Fa indrindra indrindra, ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny areti-mifindra ao amin’ny distrika mpampiantrano, izay manampy amin’ny fifehezana ny valanaretina mety hitranga.
Ho fisorohana ny aretina na ny loza dia, mampatsiahy ireo tranga mety hiseho sy manome toromarika vitsivitsy ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Ny tsy tokony hifohana zava-mahadomelina, ny tsy fanaovana taingimbe, izay mety hitarika lozam-pifamoivoizana, satria maro ny fiara mifamezivezy amin’io fotoana io. Tokony hisotro rano madio sy matetika ihany koa, manoloana ny fiovaovan’ny maripana ka mety hahatonga aretina. Ny fanarahana toromariky ny tompon’andraikitra eny amoron-drano sy ny tompon-tany, sns…
« Efa mihilana aty Atsimo ny masoandro ary manana anjara amin’izany indrindra i Toliara sy ny Faritra Atsimo Andrefana ». Io no nambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, nandritra ny lahateny nataony tamin’ny vahoakan’i Toliara. Porofon’izany fihilanan’ny masoandro ...Tohiny